Navigation Menu	အညာရယ် ဧရာရယ် ဇေယျာရယ်
Posted by CalmHill in ကျွန်တော်အကြောင်း, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အထွေထွေ လူတစ်ချို့အတွက်တော့ အညာသားဆိုတာ နိမ့်ကျတယ်လို့ ခံစားမိသလားမသိ အညာသားလို့ခေါ်ရင် မကြိုက်ချင်ကြဘူး။ ကိုယ့်အတွက်တော့ အညာသားဆိုတာ အင်မတန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပဲ ဘယ်သူပဲခေါ်ခေါ် ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်အညာသားလို့ အမြဲပြန်ဖြေပါတယ် အသားအရောင် ကြည့်လိုက်ကတည်းက အညာသားဆိုတာ ဘယ်လိုမှ သက်သေပြစရာ မလိုအပ်ပဲ လူတိုင်းလက်ခံကြတယ်။ အိမ်ကိုဆောင်းတွင်း ပြန်ချင်ပေမယ့် အခြေအနေအရေ ဆောင်းအကုန်နွေအကူး တပေါင်းလထဲမှပဲ ရောက်ခဲ့တော့တယ်။
Mar.12 7	7 Comments
hsumyat	March 12, 2012 at 9:51 pm	i love this post so much coz i LOVEanyar .
Reply	Ko zin	March 15, 2012 at 1:40 pm	ရှမ်းလေးကျွန်းဘက်ရောက်တော့ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ နေပြည်တော်မှာ သီတင်းသုံးမယ့် သံဃာတော်တွေ ပါတိမောက်ရရမယ်ဆိုတာရယ် အခြားဝိနည်းပြဿနာတွေနဲ့ ရှမ်းလေးကျွန်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး ပြဿနာဖြစ်ကြပြီး ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးက မန္တလေးတောင်ပေးက ဗျာဓိပေးကိုယ်တော်ကြီးမှာ ခြံထဲကနွားကြီးငြိမ်ငြိမ်နေလို့ စာတက်ချိတ်ထားလို့ ဆရာတော်ကြီးကို မင်းတုန်းမင်းကနယ်နှင်ရတဲ့ ငယ်တုံးကဖတ်ဖူးတဲ့ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်တွေကို သတိရမိတယ်။ ကျန်တော်ပဲ စာဖတ်တာနဲလို ့လားမသိဘူး
Reply	CalmHill	March 15, 2012 at 2:16 pm	ဟုတ်တယ် စာလုံးပေါင်းမှားတာ ဗျာဒိတ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ပြင်လိုက်ပါပြီ ကျေးဇူးပါပဲ။
Reply	ဒီဇုံ	March 16, 2012 at 7:05 pm	အဲဒါ ပြောတာပေါ့။ စ လုံး ရောက်မှ စာလုံးပေါင်းတွေ ခဏ ခဏ မှားနေတယ်။
Reply	CalmHill	March 18, 2012 at 2:19 pm	ကြည့်စရာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမရှိဘူးဟ မှားတာကတော့ အရင်လည်းမှားတာပဲ အရင်ကတော့ မသေချာရင်ကြည့်စရာရှိတယ် Reply	စင်စင် sinsin	March 22, 2012 at 9:25 pm	အခုမှ လာဖတ်ရတယ်.. ပုံပါရင် ပိုအသက်ဝင်သွားမယ်….
Reply	CalmHill	March 22, 2012 at 9:27 pm	ဓာတ်ပုံတွေက Photos မှာတင်ထားပြီးသားရယ်။